Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Inona no tokony ho fantatrao momba ny mifindra any Dubai
Sarotra sy mandany fotoana foana ny fanovana ny toeram-ponenanao, indrindra rehefa mifindra any an-tany hafa. Ny Emirà Arabo Mitambatra dia firenena mandroso ara-toekarena sy ara-teknolojia. Misokatra ho an’ny olom-pirenena tsotra sy ny mpandraharaha, saingy tsy dia tsotra loatra ny zava-drehetra eto. Ny loharano- https://emirates.estate - hilaza aminao ny momba ny fifindra-monina any UAE.
Toetra ara-kolontsaina ao amin'ny Emirates
Ny sata iraisam-pirenena ambony, ny toe-karena matanjaka ary ny toe-draharaha ara-barotra mahazo aina dia tsy manafoana ny maha-firenena silamo an'i UAE manana fomban-drazana manokana.
Hentitra ho an'ny rehetra ny lalàna ao amin'ny Emirates: ny eto an-toerana sy ny vahiny. Na dia eo aza ny zava-misy fa mifandray amin'ny mpitsidika, dia tena manaja-maso ny zavatra maro. Tsy midika akory izany fa tsy ho voasazy ny fandikan-dalàna hentitra. Ny mponina ao Dubai dia tsy mivadika amin'ny mpitsidika ary ho takalon'izany dia manantena ny fanajana ny soatoavina eo an-toerana.
Inona no fanantenana miandry ny vahiny
Vahiny maro izay nifindra tany Emirà Arabo Mitambatra noho ny fonenana maharitra no manonona antony manokana. Manoro hevitra ny hahafantatra azy bebe kokoa izahay.
Toe-karena marin-toerana sy tontolo ara-bola tsara. Ny anton'ny fahasambarana ara-bola dia mahasarika ampahany betsaka amin'ny mponina mifindra monina. Ny haavon'ny karama, tsy misy hetra amin'ny fidiram-bola, ary koa ny vola marin-toerana, dia mamorona ny fepetra tianao hiezahana;
Fampiasam-bola mahasoa amin'ny trano fonenana. Ny sehatry ny trano any Dubai dia tena mandroso tsara. Porofon’izany ny fitakiana be, ny hetsika fampiasam-bola ary ny fiakaran’ny vidim-piainana tsy an-kijanona. Noho izany, ny mpividy trano fonenana eo an-toerana dia tsy mahazo fananana tsara ho an'ny fiainana, fa fananana sarobidy ihany koa;
Karama ambony. Ny manam-pahaizana manokana ao Dubai, toy ny any an-kafa, dia omena lanja, noho izany dia vonona ny handoa tsara ny orinasa eo an-toerana;
Fifindra-monina. Misy safidy maromaro izay ahafahan'ny vahiny ho lasa olom-pirenen'ny Emirates: fanambadiana, fianarana ao amin'ny firenena, asa, fandraisana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ary fampiasam-bola amin'ny trano;
Fiarovana avo. Ny Emirates dia mitana ny 3rd toerana eo amin'ny lafiny fiarovana, raha Dubai dia eo amin'ny toerana faha-8 amin'ny tanàna azo antoka indrindra eto an-tany.
Iza no ankatoavina amin'ny hetsika
Hankatoavina ho an'izay olona manankarena ara-bola, tsy misy firaketana heloka bevava ary tantaram-bola tsara.
Inona ny fari-piainana any Dubai
Dubai no tanàna lehibe indrindra eran-tany amin'ny resaka karama, ary koa ny manankarena indrindra amin'ny Emirates. Ny vidin'ny trano any Dubai dia manomboka amin'ny USD 3,000 ka hatramin'ny USD 8,100.
Hividy trano any UAEMahaliana anao trano amidy any UAE? Mitadiava trano nofinofy amin'ny safidy an-jatony ao amin'ny tranokala Emirates.Estate. Eto ianao dia tsy hahita afa-tsy ny tolo-kevitra tsara indrindra avy amin'ireo tompona voaporofo sy mpamorona lehibe ao UAE. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fifindrana sy ny fividianana trano any Dubai, azafady mifandraisa amin'ny mpitantana ny orinasa.